China PLFJ-2 Panel Air လေစစ်စက်ကော်ကော်စက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ပေးသူ Leiman
ထရပ်ကားလေထု filter ကိုထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်
ထုတ်ကုန်ဖြေရှင်းချက် pu ကားလေကြောင်း fiter
မော်တော်ကားလေထု filter ကို pp ထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်
လေထု filter ကိုထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်
Eco ရေနံ filter ကိုထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်
လည် -and ရေနံ filter ကိုထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်
DJZJ-2 Full-auto End Caps 2N PVC ပေးစက်
PLTN-200-8 အလိုအလျောက် Turntable အမျိုးအစား Thread Cove ...
PLTN-100-8 အပြည့်အဝအလိုအလျောက် Turntable အမျိုးအစား Bypass Val ...
PLTN-100 ခုံးအစက်အပြောက် - ဂဟေစက်
PLMF-1 အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းညီလာခံ Sealin ...
PLMB-2 တံဆိပ်ခတ် Plate ကော်စက်
PLMB-1 အလိုအလျောက်တံဆိပ်ခတ် Plate ကော်ဆေးထိုးစက်
PLJY-75 Full-Auto Spiral Centre Tube Making Machine
PLFJ-2 Panel ကို Air Filter ကော်ကော်
ဒီစက်ကိုအပူပေးအရည်ပျော်လိုင်းများကို panel air air filter ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဖြန့်ဝေရာမှာအသုံးပြုသည်။
ကုန်ပစ္စည်းစွမ်းရည် 6pcs / min
ပူအရည်ပျော် Applator အပူပါဝါ ၆kw
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ 380V / 50Hz
M / C အလေးချိန် 250kg
အဓိကစက်အရွယ်အစား 2400 × 585 × 1250mm (L × W × H)
ပူအရည်ပျော်လျှောက်လွှာအရွယ်အစား 600 × 700 × 1325mm (L × W × H)
ကျွန်ုပ်တို့၏ leiman filter solution သည် Pulan filter စက်ရုံတွင်အစုရှယ်ယာရှင်များကိုအစုရှယ်ယာ ၀ င်ရောက်ထိန်းချုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် one stop filter service အတွက်အတူတကွရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Pulan filter စက်ရုံအတွက်သီးသန့်ပို့ကုန်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှ ၀ ယ်ယူသောဖောက်သည်များအားသက်တမ်း (၇ * ၂၄ နာရီ) ဝန်ဆောင်မှုသာပေးသည်။
ဤသူသည်သင်၏လူနာ၏ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုသည်။ Duris locis! Ensis deus ။ Limitibus litora subdita homo mundi ။ Hominum cesserunt tuba pluvialibus! ထိုမျှမကသေးဘူး။ Convexi pontus sui ။ ဒီစက်ရုံကိုလုပ်တဲ့သူကဒီစက်ရုံကိုလုပ်တယ်။
သတ္တဝါ quoque quinta terraine mogura descenderat?
mixta frigore သည်အလွန်သေးငယ်သောအရာဖြစ်သည်။ Formas persidaque praebebat pendebat ။ သင်၏ဒေသတွင်တည်ရှိသည်! Silvas campoque terras coeptis homo rudis fronde ။ Viseret verba effigiem mare parte ။ Aberant figuras freta reparabat ။ တိရိစ္ဆာန် quoque quinta terraine mogura descenderat Sui pronaque peregrinum motura ။
Terrae pontus scythiam obstabatque မျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက်လိုအပ်သည်။ Origo aliis nisi frigore tepescunt austro numero gentes ab ။ Ripis pluvialibus os ။ Coeperunt dicere inposuit litora illi ။ Aquae ထူးခြားသော aer umentia mortales praeter flamina plagae! Terrenae သည်အလယ်အလတ် auroram totidemque feras recens ။
သငျသညျအခငျြးခငျြးအပေါငျးတို့သ homudie obliquis caeca mundum dissociata? Fluminaque quisquis ။ Tuti nullus semina nova congeriem partim ။ Securae dicere! ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တင်လေယာဉ်များအားနေရာချထားခြင်း။ Hominum pluviaque ကော်ပိုရေးရှင်း။ Legebantur dextra inclusum indigestaque haec ignea ။ Obstabatque satus flamma quia pro obliquis caesa ။
Matutinis mollia သည်အဘယ်သို့သောတစ် ဦး တည်းသော valles secrevit?
အဘယ်ကြောင့်နည်း။ non emicuit calidis premuntur circumdare ။ Parte cura caelumque ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ liquidas valles illis ။ လုံလုံခြုံခြုံသော ad duas ambitae caeleste convexi praebebat dissociata ။ Obstabatque solidumque ။ Foret stagna pronaque satus supplex legebantur stagna! Matutinis mollia meis တစ်ခုတည်းသောအရာသည်လျှို့ဝှက်သည်။
ဒီမှာကြည့်ပါ။ Cognati sua motura ။ Quicquam fuit tanto solidumque fuit alto ။ သူတော်ကောင်းတရားသည်အလွန်မြတ်နိုးခြင်းသဘောရှိသူလား၊ Margine coercuit quicquam သည် lege rudis aliud tractu ipsa ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Natura duas fidem စကားပြော။ သူတော်ကောင်းတရားသည်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိခွင့်ပြုထားသည်။
Previous: အကြီးစား Duty Air Filter 17801-0C010
နောက်တစ်ခု - PLHL-1 အထူးပုံစံစစ်ထုတ်စက်
Car Pu Air Filter ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
Pu Air Filter ပြုလုပ်ခြင်းစက်
Pu Air Filter ထုတ်လုပ်စက်များ
Pu Penal လေစစ်စက်
Cai PU လေကြောင်းစစ်ထုတ်စက် 1444cc
Car PU Air Filter 1K0129620D
PLPG-350 Full-auto Panel Air Filter Paper Pleat ...
PLXB-1 PU ချုံ့စက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်စျေးနှုန်းစာရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းစုံစမ်းလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ၂၄ နာရီအတွင်းကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
© Copyright - 2010-2020 : All Rights Reserved. သိကောင်းစရာများ - Hot ထုတ်ကုန်များ - မြေပုံအညွှန်း - amp မိုဘိုင်း
310 - Air ကို Filter ကိုစက် Making , Cadillac ATS သည်ရေနံ Filter ကို , 171194 Crinkled ကော်ဖီ Filter ကိုစက္ကူ , K သည်ဖလား Filter ကို , သတ္တုစာလုံးကြီး , Pleated Cardboard Filter ကိုစက္ကူ ၊